Mahatakatra. Mahaiza marika. Manangana fahatokisana. | Martech Zone
Na dia mety milay kokoa aza ny tetika ara-barotra amin'ny Internet noho ny dokam-barotra fanontana taloha mankaleo, io fihenan-kery io dia tsy mampiala anao amin'ny fanaovana asa marika fototra. Ny touchpoint rehetra dia fotoana voalohany hanatsarana ny fitiavanao marika amin'ireo mpihaino kendrenao.
Fantaro ny fomba ampiasan'ilay olona amin'ny lafiny hafa an'io resaka teknolojia nomerika io. Amin'ny ambaratonga firy izy no misokatra amin'ny fiaraha-miasa aminao amin'ity resaka ity? Raha sahirana izy manamarina ny mailaka ataony mandritra ny andro fiasana alohan'ny hidirany amina fivoriana telo ambadika telo, tena tadiaviny tokoa ve ianao hiondrika amin'ny tendany amin'ny tolotra maharikoriko? Mety kokoa ve ny fampahalalana mahasoa, zavatra fantatrao fa tadiaviny? Angamba. Tsia angamba. Mikatsaha hahafantatra. Ary avy eo ampiasao ny fahatakaranao hamboarina ny hafatra ary ampiasao amin'ny fomba mahomby kokoa ny haino aman-jery.
Mitondra tena foana amin'ny fomba izay mifanaraka amin'ny fampanantenan'ny marika sy ny toetranao. Ny fitantanana ny marika dia tsy hoe hahazoana antoka fa hiseho amin'ny toerana mety sy hampiasa ny loko mety hatrany ny sary famantarana anao. Afaka manampy ireo zavatra ireo. Ny tena zava-dehibe, ny takelaka mikasika rehetra dia fotoana iray hanehoana ny marikao ary hametrahana na hanamafisana ny fitokisana. Moa ve io tolotra maharikoriko voalaza etsy ambony io mifanaraka amin'ny marikao? Raha ny maharikoriko sy manakorontana dia ao amin'ny marikao (mirary soa amin'izany), dia manolora. Fa, raha fantatry ny mpihaino anao ho zavatra hafa izy dia avereno amboary ny fifandraisanao. Na inona na inona ataonao, fantaro hoe iza ianao ary inona no iorenanao ary ampitao io marika io hananganana fitokisana.
Fantaro ny fifandraisan'ny mpihaino amin'ny haino aman-jery sy ny hafatra ampitainao. Ny asa dia azo antoka fa tsy vita fotsiny satria nanosika handeha ianao. Ampiasao ny angon-drakitra, ny fifanakalozan-kevitra, na ny hevitra hafa azonao hahalalana ny fihetsiky ny mpihaino anao ary avy eo amboary ny paikadinao, ny drafitra ary ny fanatanterahana anao.
Tags: Globysfironana fialantsasatrafampiroboroboana pinterestfitaovanafitaovana wireframeyuri wright
Jolay 27, 2009 amin'ny 9:16 PM
Lahatsoratra tsara, Nila! Betsaka ny olona no manadino fa ny mpihaino dia fanalahidin'ny paikady marika rehetra. Misaotra indrindra nandefa an'ity!